विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देश न्यायमूर्तिको हातमा रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई साथलिएर जुनसुकै बेला संसद विघटन गरिदिनसक्ने भन्दै पटकपटक निर्वाचनमा जानुपर्ने वाध्यता आउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोक्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताए।
“चुनाव गर्न मात्रै जनतामा जाने हो की विकास पनि गर्ने हो जनताको? अदालतबाट प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सदर गर्ने हो भने कार्यकारी अधिकार हातमा लिएपछि राष्ट्रपति साथमा भएपछि जे पनि गर्न पाइने भयो नेपालमा। जनताको भोटको के अर्थ,” विराटनगर विमानस्थलमा आज नेता पौडेलले भने, “भोट हाल्यो, त्यो भोट एउटा सन्की आएर फाल्दिहाल्छ । यो राष्ट्र जोगाउने एउटै आधार सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।”
नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश-१ मा आफ्नो पार्टीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। केन्द्रमा छाया सरकार बनाएर बसेको भन्दै उनले प्रदेश-१ मा पनि अहिलेको सरकार विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आए कांग्रेसले खिलाफमा मतदान गर्ने बताए।
पटकपटक चुनावका नाममा अरबौं रकम खर्च भइरहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि संसद विघटनलाई प्रतिगामी कदम मान्दै यसलाई सच्याउने उनको भनाइ छ। “कांग्रेसको एउटै लाइन हो। प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगामी हो र यसलाई हामी सच्याएरै छाड्छौं। ७० वर्ष लगाएर बनाएको संविधान बचाउनुपर्छ,” नेता पौडेलले भने, “देशको संविधान बचाउन संसदको पुनः स्थापना गर्नुपर्छ। जुन प्रधानमन्त्री आयो त्यसैले संविधान फालिदिने?”
कांग्रेसमा ससंद विघटनलाई लिएर एउटै लाइन रहेको उनको दाबी छ। कांग्रेसले महाधिवेशन पनि गर्ने र संविधान तथा पार्टीको विधान पनि बचाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। नेता पौडेलले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय राष्ट्रघाती भएको बताए। “मेरो राजनीतिक निर्णय भन्नु हुन्छ केपी ओली। यो राजनीतिक निर्णय राष्ट्रलाई जोगाउन हो की ध्वस्त पार्न हो मेरो प्रश्न यहीँ छ?”, उनले भने, “राष्ट्रघाती निर्णयलाई जनता र अदालतले किन मान्ने?”
संविधानलाई भत्काउन नपाइने उनको भनाइ छ। नेपाललाई अफगानिस्तानतर्फ लैजान खोजेको उनको आरोप छ। कांग्रेस सरकारमा नजाने उनले स्पष्ट पारे। कांग्रेसले संसद विघटन अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी, असंवैधानिक र सर्वसत्ताबादतिर जान लाग्यो भन्ने कांग्रेसको निर्णय भएकाले सरकारमा जानेबारे कोही व्यक्ति विशेषले दायाँबायाँ गर्न नपाउने बताए।
“कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर आफूले संविधान विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री मुद्दा खारेज गर्न अदालतलाई ओदेश दिँदै हुनुहुन्छ। यो भनेको के हो? हामीले यसकै लागि ७० वर्ष लडेर संविधान बनाएको हो?,” वरिष्ठ नेता पौडेलले भने।
Tagsवरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल